Ukubuyekezwa kwe- "Pedro and the Captain" | Izincwadi Zamanje
I-Encarni Arcoya | | Abalobi, Indawo yaseshashalazini
Osanda kushona UMario Benedetti Usishiyele ezihlokweni zakhe eziningi incwadi encane enesihloko esithi "Peter and the Captain", engeyezinhlobo zemidlalo yaseshashalazini yize, njengoba umbhali uqobo avuma, akazalwanga enomqondo wokumelwa.
Kuyena umhlukumezi nomhlukumezi Banomhlangano wobuso nobuso ogcina izikhathi eziningana lapho umhlukumezi enomsebenzi wokwenza abahlukumezekile bakhulume bese kuthi laba bokugcina bathule ukuze bangakhapheli abangane bakhe. Ibanga lomqondo lehlukanisa bobabili abalingiswa futhi ngaphandle kokuthi uKaputeni ngokusobala unamandla, amatafula ajika kuyo yonke indaba.
Futhi yilokho Pedro, abahlukumezekile, uyaqonda (noma uzenza aqonde) ukuthi empeleni usevele ufile, ukuthi akukho kulokhu okungokoqobo, ukuthi akwenzeki, ukuthi akukho azokulahla nokuthi ubuhlungu buyisimo sengqondo sokuthi abafile ungahlupheki ukuze ngandlela thile avikeleke ochungechungeni lwesihluku esenziwa ngumhlukumezi.
Futhi, sengathi lokho bekunganele ... uthatha isinqumo sokuhlukumeza umhlukumezi wakhe ngokuhlikihla ukumelana kwakhe nokudlala naye ukuze athinte izinkinobho ngokwengqondo ukuthi akekho umuntu owake wathinta ...
Ngokwami, ingenye yezincwadi engizithandayo futhi ngicabanga ukuthi kungaba yimpumelelo ukube bekungenye yemisebenzi eyimpoqo yokufunda ezikoleni zamabanga aphezulu ... kuningi ongakufunda Emigqeni kaMario omkhulu, kwangathi angaphumula ngokuthula, engibonga kakhulu kuye wonke amagama asishiyele wona njengefa emsebenzini wakhe obanzi futhi omuhle.
1 Isifinyezo sikaPeter noKaputeni
1.1 Ingxenye yokuqala
1.2 Ingxenye yesibili kaPeter noKaputeni
1.3 Ingxenye yesithathu
1.4 Ingxenye yesine neyokugcina kaPeter noKaputeni
2 Abalingiswa bakaPeter nokaputeni
Isifinyezo sikaPeter noKaputeni
Umsebenzi kaPedro nokaputeni ungahlukaniswa ube izingxenye ezine ezihlukaniswe kahle, lapho imicimbi inyuka ngamandla ngamandla ngenhloso yokuthi kukhona i-crescendo emsebenzini. Okungukuthi, ifuna lokho umfundi uzobona ukuvela kwesimo nokuthi iba yingozi kakhulu kangakanani, iyaheha. Ngale ndlela, uMario Benedetti ubamba umfundi kumdlalo afuna ukuwudlala.
Izingxenye zikaPeter nokaputeni yilezi:
Kule ngxenye yokuqala uzohlangana nomlingisi ophambili, uPedro oyiswa egumbini lokuphenywa. Lapho umthola efakwe izigqoko futhi eboshwe ukuze angabaleki noma abone lutho kuze kungene enye indoda kuleli gumbi, okuthiwa uKaputeni.
Umsebenzi walokhu ukumphenya ngemibuzo nokuthola imininingwane ayidingayo. Wazisa uPedro ukuthi okwenzekile kuye, isifundo asitholile, kube yinto elula nokuthambile kuphela uma kuqhathaniswa nalokho okungamlindela uma engasebenzisani, ukuhlukunyezwa nokujeziswa okukhulu ngokwengeziwe. Into okungekho muntu okwaziyo ukuyithwala.
Futhi, ikuxwayisa ukuthi wonke umuntu ukhuluma ngale ndlela noma enye.
UKaputeni uzama ukumenza abambisane ngakho konke, amveze konke okungenzeka uma engakwenzi, kanye nokumenza aqonde ukuthi ungumuntu othola konke akufunayo. Futhi uyalithanda uhlangothi lukaPedro, njengoba azi ukuthi bayabathanda. Kuyindlela ye- thola ukwethenjwa komunye.
Kodwa-ke, naye uyamsongela, hhayi ngenxa yakhe kuphela, kepha nangenxa yomkakhe. Ukushintshanisa ngokungabekezeleli ubuhlungu noma ukubeka engcupheni lokho akuthanda kakhulu, kanye nokuphuma ngaphandle kwabangane bakhe azi ukuthi usebenze, kufanele aveze amagama amane.
Kodwa akukho akushoyo, hhayi ngendlela enobungane noma esabisayo, ekhonza ukaputeni, ngoba uPedro uyisimungulu futhi akaphenduli kunoma yikuphi okushiwo.
Ingxenye yesibili kaPeter noKaputeni
Ingxenye yesibili yomdlalo iveza uPedro futhi, ngokuthola okunye ukushaywa nokuhlukunyezwa. Kukhona ukaputeni, ozama ukuzwana nesiboshwa futhi aphendule lokho okudingeka akwazi. Ngakho-ke, ususa i-hood, into okuthi, engxenyeni yokuqala, ihlale ikhona.
Kungaleso sikhathi lapho uPedro ekhuluma khona, lapho emtshela khona ukuthi ubengakwenzanga phambilini ngoba kuye bekubonakala kuyinto engafanele ukuphendula nge-hood. Kodwa-ke, kungesatshiswa, manje UPedro obuza uKaputeni imibuzo mayelana nomndeni wakhe, okuthatha njengengozi. Ngokubona ukusabela, uPedro ubuza futhi ukuthi kunjani ukubuyela ekhaya ngemuva kokubulala amanye amadoda. Lokho kumenza acasuke agcine ngokumshaya, yize, noPedro, wayefuna ukuzenza "omunye wabafana abalungile."
Ngemuva kwemizuzu embalwa ukwehlisa umoya, uKaputeni uzwelana noPedro, evuma ukuthi uzizwa kabi ngemuva kwalokho akwenzayo, futhi enethemba lokuthi isisulu esimelana naye sigcina ngokunikela ngaphambi kokuhlushwa nokujeziswa kube yinto enesihluku, ireferensi ecacile ecela uPedro ukuthi ayeke ukumelana nayo.
Ngemuva kokuthula, impendulo kaPedro iphetha le ngxenye.
Ukwethula kuKaputeni oshonile, izingubo zakhe zishwabene, nothayi wakhe uqaquliwe. Buza ngocingo ukuthi ubuyise uPedro, obonakala ekhuluphele kakhulu futhi enamachaphazelo egazi ezingutsheni zakhe.
Akholelwe ukuthi ufile, uKaputeni asondele kuye ambeke esihlalweni. Kungaleso sikhathi lapho uPedro aqhuma khona ehleka, ekhumbula ukuthi ngalobo busuku, ngenkathi ehlushwa ephuzwini, kwacima isibani futhi abakwazanga ukumqeda.
Emzameni wokumbuyisa, uKaputeni ubiza uPedro ngegama lakhe, aphendule ngokuthi akayona, kepha igama lakhe nguRomulus (igama lakhe). Nokuthi naye ushonile. Ungabona i- umzamo wesisulu ukuzama ukweqa kuleso simo, wokucabanga ukuthi usefile nokuthi bonke lobu buhlungu abuzwayo busemcabangweni wakhe kuphela, kodwa ukuthi abukho ngokoqobo.
Ngemuva kwengxabano noKaputeni, lapho ukufa nobuhlanya kudala khona ukuqubuka phakathi kwabo, uKaputeni uphelelwa yithemba futhi abone ukuthi ngeke athole lutho kuye.
Yilapho izindima zishintsha khona. UPedro uqala ukukhuluma noKaputeni, kuyilapho lowo eqala ukukhuluma naye ngenhlonipho enkulu. UKaputeni uyamvulela, akhulume ngomkakhe, ukuthi ugcine kanjani esebenza njengomhlukumezi nokuthi ikuthinte kanjani impilo yakhe.
Kepha nguPedro ophindayo ukuthi ufile nokuthi akukho angamtshela khona.
Ingxenye yesine neyokugcina kaPeter noKaputeni
UPedro oshaywe futhi efa cishe uvela phansi. NoKaputeni ojulukile, akekho uthayi, ibhantshi futhi wethukile kakhulu.
Ubona ingxoxo evela kuPedro, othi, edabukile, acabange ukuthi ukhuluma no-Aurora, yize eyedwa. Kungaleso sikhathi lapho uKaputeni uyakuqonda konke okubi akwenzayo ngokuhlukumeza abantu futhi ucela igama, noma yiliphi igama, ukuzama ukumsindisa, kodwa ngasikhathi sinye azisindise. Kodwa-ke, uPedro uyenqaba ukwenza lokho, futhi bobabili bagwetshwa izindima zabo.
Abalingiswa bakaPeter nokaputeni
Umdlalo uqukethe kuphela abalingiswa ababili: uPedro noKaputeni. Imayelana nezibalo ezimbili eziphikisayo ezigcina ukungezwani kuwo wonke umlando, kodwa futhi bashintsha indlela yabo yokucabanga, badalula kancane kancane.
Ngakolunye uhlangothi, unoPedro, isiboshwa obonakala esamukela isijeziso sakhe ngaphandle kokucela isihe noma ukuncenga impilo yakhe. Uyakholelwa emibonweni yakhe futhi uzimisele ukuyivikela nangempilo yakhe. Ngalesi sizathu, ngesikhathi esithile ubheka ukuthi usevele ufile, nokuthi konke okwenzeka kuye kungumphumela womqondo wakhe kuphela.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona uKaputeni, omunye wabalingiswa ovela kakhulu kulo lonke umdlalo. Kuqala njengomuntu onegunya ofuna ukuxhumana nomunye umuntu ngokudalula konke okuzokwehlela yena uma engasebenzisani, kepha ngasikhathi sinye ezama “ukwenza ubungane” naye ukuze enze njalo.
Kodwa-ke, njengoba indaba iguquka, umlingiswa naye uyathanda, eqonda ukuthi akawuthandi umsebenzi wakhe, elandisa izingxenye ezithile zempilo yakhe ezimenza abe ngumuntu ebusweni bokuhlushwa akwenza kwabanye. Ngakho-ke ufuna ukulungiswa ngalokho akwenzayo. Inkinga ukuthi uPedro akamemukeli, namanje akazwelani naye, okuyinto ecasula uKaputeni ngoba, ngisho nokuvuma, uyaqhubeka ngaphandle kokuthi omunye enze lokho akufunayo ngempela, ukuvuma.
Ngale ndlela, kubonakala ukuvela kwezinhlamvu. Ngakolunye uhlangothi, lokho kukaPedro, oziyekela ekuhlanyeni nasekufeni azi ukuthi akazophuma lapho futhi okungenani ngeke asho lutho. Ngakolunye uhlangothi, lokho kukaKaputeni, okuhlala emsebenzini kungazi ukuthi kuzokwenzekani ngesiphetho sakhe.
Ngabe uyafuna ukuyifunda? Ithenge lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » "Peter and the Captain" enye yezincwadi ezinhle kakhulu ezake zabhalwa
"Lapho kuhlala khona ukungakhohlwa"